Nagu saabsan - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
------ Aaminaaddaada hal-joojiye Display-soo-saare & Dhoofiye.
SHENZHEN YONWAYTECH CO., LTD waa khabiir ku takhasusay bandhigga LED iyo calaamadaha LED ee dalabyo kala duwan sida marxaladda munaasabadda, carwada bandhigga, dhismaha, xayeysiinta, bangiga, ciidanka, xarunta amniga, xarunta TV-ga, soo dhaweynta tafaariiqda, xarunta warfaafinta, xafladda, kaniisadaha, dhismooyinka, xarunta ganacsiga, bangiga, maqaayada, suuqa weyn, garoonka diyaaradaha, iwm.
Shirkad la aasaasay 2015 oo ay weheliso koox u go'day wax soo saarka la soo bandhigay ilaa 2006.
Iyada oo leh niyad wanaag, ixtiraam, heer sare iyo naxariis, Yonwaytech waxay dhistaa oo ilaalisaa kalsooni qoto dheer macaamiisheenna, waratadayada, iyo kooxdayada.
Aaminsanaanta jihaynta macaamiisha, Yonwaytech had iyo jeer waxay ku hawlan tahay bixinta adeegyo tayo sare leh iyada oo loo marayo shaqadeena.
Aniga oo u mahadcelinaya dhammaan macaamiisheenna ku sugan 6 qaaradood, waxaan si joogto ah u sii kori doonnaa si aan si wanaagsan idiinku adeegno.
SHENZHEN YONWAYTECH CO., LTD oo ah shirkad bixiye caalami ah oo ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista, iyo adeegga LED DISPLAY iyo calaamadaha dhijitaalka ah.
Waxaan bixinaa xalal LED SCREEN oo loogu talagalay codsiyo badan oo gudaha iyo dibedda ah, oo ay kujiraan sida HD shaashad muuqaal pixel cidhiidhi ah, muujinta tooska ah ee gudaha, muuqaalka kirada hogaaminaya gudaha, tafaariiqda tafaariiqda, muuqaalka gooldhalinta aan caadiga ahayn, shaashadda hoggaanka gudaha, shaashadda LED-ka, bandhig hufan, bandhig dabacsan, ganacsi horseed ah, taksi topper hogaaminayo shaashad, smart shelf hogaaminayo bandhig, banaanka midab buuxa oo hagaagsan soo bandhigid, bannaanka dhacdo kiro biyo caddeyn la keenay bandhig, daah hogaaminayo bandhig, bannaanka IP67 keentay shaashadda, bandhigga keydinta tamarta , Bandhigga garoonka garoonka, muujinta wareega wareega iyo bandhig kale oo loo habeeyay oo loogu talagalay mashruuc habeysan.
Iyada oo gacan ka heleysa mashiinno casri ah oo dhameystiran iyo qalab casri ah oo ka kooban dhammaan qeybaha geedi socodka wax soo saarka oo ay ku jiraan R&D, injineernimada, wax ka sameynta iyo wax soo saarka, Yonwaytech waxay si adag u fulisaa qawaaniinta nidaamka kormeerka tayada caalamiga ah ee ISO9001 oo leh awood wax soo saar ee 3,000 mitir laba jibbaaran oo muujinaya LED bishiiba.
Dufcad kasta oo badeecado ah ayaa mari doona tijaabinta cidhiidhiga hawada ee adag, tijaabada gariirka, tijaabinta heerkulka sare iyo hooseeya iyo 72 saacadood oo ah badeecado gaboobay intaan la keenin.
Waxaan bixinaa adeegga iibka ka hor 24/7 iyo taageerada farsamo ee macmiilkayaga, soo jeedinta farsamada ama miisaaniyadda mashruuca waa la bixin karaa.
Mashruuc loogu talagalay oo leh qorshe nidaamsan iyo naqshadeynta maskaxeed ee macaamilkayaga inta lagu jiro adeegga iibka.
Taageero farsamo oo bilaash ah iyo tababar ayaa la siin karaa macmiilkeena, 2-5 sano oo damaanad ikhtiyaari ah iyadoo loo eegayo baahida macmiilka.
Bandhigeena hogaaminaya wuxuu uqalmaa suuqyo kaladuwan oo leh shahaadooyin sida CE, EMC, UL, ETL, IECEE, SASO iwm.
Khibrad hodan ah oo ku saabsan warshadaha soo bandhigida LED-ka, waxaan u suurtagelineynaa macaamiisha inay gaaraan xalka ugu fiican tayada ugu sareysa tayada shaashadda oo lagu daray qiime macquul ah